गर्भवती हात्तीलाई विस्फोटक पदार्थ खुवाएर मार्ने पक्राउ
एजेन्सी । भारतको केरलामा एक गर्भवती हात्तीलाई मारेको अभियोगमा एकजना पक्राउ परेका छन्। राज्यका वनमन्त्री के राजुका अनुसार प्रहरी र वन विभागका कर्मचारीको संयुक्त टोलीले एकजनालाई पक्राउ गरेका हुन्। विस्तृतमा
रसियामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५ हजार ७ सय २५ पुग्यो
भारतमा कस्तो छ कोरोनाको पछिल्लो अवस्था ?
ब्राजिलमा ३ लाख २ हजार ८४ ले पराजित गरे कोरोना
विश्वभर कोरोना भाइरसबाट ४ लाख बढीको मृत्यु, अमेरिकामा मात्रै १ लाख १२ हजार ९६ ले ज्यान गुमाए
यी हुन् विश्वमै सबैभन्दा धेरै सुन उत्पादन गर्ने देशहरु, अष्ट्रेलिया कतिऔँ स्थानमा ?
एजेन्सी । विश्वमा केही यस्ता देशहरु रहेका छन् जसले सुन व्यापारबाट समेत ठुलो आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । सुन उत्पादन गर्ने मामिलामा सबैभन्दा अगाडि चीन रहेको छ । उसले वार्षिक ४४० टन सुन उत्पादन गर्छ ।
तान्जानियामा तीन दिने राष्ट्रिय शोक घोषणा
एजेन्सी । तान्जानीयामा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेको ट्याङ्कर विस्फोटन भएर कम्तीमा ६० जनाको मृत्यु भएपछि राष्ट्रपति जोन मागुफुलीले तीन दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेका छन् ।
एजेन्सी । बालयौन दुराचारको आरोपमा जेलमा परेका अमेरिकी अर्बपति व्यापारी जेफ्री एप्स्टाइनले शनिबार न्यूयोर्कको जेलभित्रै आत्महत्या गरेका छन् । अमेरिकी सङ्घीय जाँच ब्युरो -एफबीआई- र न्याय विभागले एप्स्टाइनले आत्महत्या गरेपनि यौन दुराचारको मुद्दाको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन् ।
एजेन्सी । क्युबाका राष्ट्रपति मिगेल डायाज–केनेलले अमेरिका समेतका पश्चिमी मुलुकको बहिस्करणमा परेको भेनेजुएला सरकारमाथि पुनः समर्थन जनाएका छन् ।
एजेन्सी । म्यानमारमा बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या ४८ पुगेको छ ।
भाजपाद्वारा जम्मू-कश्मीरमा ५० हजार झण्डा फहराउने उत्तेजक कार्यक्रम घाेषणा
जम्मू (एजेन्सी) । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को जम्मू–कश्मीर प्रदेश इकाईले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा जम्मू–कश्मीरमा ५० हजार झण्डा फहराउने भएको छ ।
सोनिया गान्धी बनिन् काँग्रेस पार्टीको अन्तरिम अध्यक्ष
एजेन्सी । भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष चुन्नका लागि शनिबार बसेको कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकले सोनिया गान्धी पार्टीको अन्तरिम अध्यक्ष चुनिएकी छिन् ।
कश्मीरमा युएनले के गर्न सक्छ ?
एजेन्सी । भारत र पाकिस्तानबीच संघर्ष बढ्ने निश्चित देखिएदै आएको छ । गभर्नर जनरल लॉर्ड माउण्टबेटनको सल्लाहमा जवाहर लाल नेहरू एक जनवरी सन् १९४८ मा को यो मुद्धा संयुक्त राष्ट्रमा लगेका थिए ।
एसियाकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक घुम्न आउने म्यूजियम कहाँ छ ?
एजेन्सी । भारतको पञ्जाब सरकारद्वारा आनन्दपुरको साहिबमा अवस्थित ‘विरासत–ए–खालसा’ म्युजियम भ्रमण गर्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा बृद्धि आएको छ ।
भारतको प्रोपोगाण्डा फेल खायो, कश्मीरमा यसरी दन्किरहेको छ डरलाग्दो आन्दोलन (भिडियो)
एजेन्सी । भारत प्रशासित कश्मीरमा भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयको विरुद्ध शुक्रबार ‘विरोध प्रदर्शन’ भएको छ । भारत सरकारले सामान्य विरोध भएजस्तो गरेता पनि कश्मीरमा डरलाग्दो आन्दोलन चर्किएको छ । यसलाई पुष्टि गर्दै बिबिसी मिडियाले आन्दोलनका केही भिडियोहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ ।